June 2021 - MM Daily Life
နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းမလို့လား . . . ဒါလေး သတိထား
June 30, 2021 by MM Daily Life
စစ်တမ်းတွေအရ ပြောရရင် စုံတွဲတွေက ပထမဆုံးအကြိမ် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းပြီးနောက်မှာ သူတို့ရဲ့ အဖော်ကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့သွားတတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခု နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတဲ့ အနမ်းဆိုတာ “ငါမင်းကို ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မို့ ချစ်သူတွေကြားထဲမှာ အဓိကကျတဲ့ အနမ်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းက နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတဲ့ အနမ်းကို နှစ်ဦးသားကြားထဲက ဘာသာစကားတစ်ခုလို ကျင့်သုံးကြတယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် အဲ့အနမ်းကို အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုအနေနဲ့လည်း သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီတော့ ချစ်သူရည်စားထားမယ်၊ အိမ်ထောင်ပြုမယ် ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတဲ့အနမ်းကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ရှောင်လွှဲလို့ ရမှာမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဒီတော့ … Read more
ဒီအချိန် လက်ထဲရှိတဲ့ ငွေကို တန်ဘိုးထားပါ….
ဒီအချိန် လက်ထဲရှိတဲ့ ငွေကို တန်ဘိုးထားပါ” မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွားရေး ထိခိုက်မှု ပမာဏက ၂၀၂ဝခုနှစ် ၆ လပိုင်းကနေ စပြီး ၁၂ လပိုင်း အတွင်းမှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ အလွန်သိသာလာပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ ငွေကို အသဲအသန်လို လာကြပါလိမ့်မယ်။ ဘဏ်ချေးငွေ မလွယ်ကူတဲ့ ဒီနိုင်ငံအတွက်တော့ ဒီပြသနာကို ‌‌ဖြေရှင်းဖို့ လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်း ၂ ခုပဲရှိပါတယ် လုပ်ငန်းတွေကို ပိတ်သိမ်းမလား၊ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထုခွဲရောင်းချပြီး လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် လည်ပတ်မလား လုပ်ငန်းတွေ လည်ပတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ ရှိထားတဲ့ ရွှေ၊ ကား၊ အိမ် စတဲ့ ၃ မျိုးကို ထုခွဲရောင်းချရပါမယ်… ရွှေ ။ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး နာရီပိုင်းအတွင်း ငွေဖြစ်တဲ့ … Read more
ရေမွန် မဆုံးပါးခင်က ရေးသားပေးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ အမှတ်တရ ဆိုပြလာတဲ့ မေရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
Idiots အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ေရမြန္ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ သတင္းက အခုထိ ဘယ္သူမွ မယုံၾကည္ႏိုင္ေသးသလို ပရိသတ္ေတြေရာ ခင္မင္ရသူေတြပါ မိသားစုနဲ႔အတူ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ အဆိုေတာ္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ဆုံးရႈံးလိုက္ရတဲ့အေပၚ အႏုပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလုံးကလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကတာပါ ။ ေရမြန္ကို ခ်စ္ခင္ၾကသူ အားလုံးကလည္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ ျပဳလုပ္ေပးၾကသလို သစ္ပင္ေလးေတြလည္း အမွတ္တရ စိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အေပၚမွာ ေရမြန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွတ္တရေလးေတြကို တစ္သက္လုံး က်န္ရွိေနေစခ်င္တာေၾကာင့္ တက္တူးမ်ား ထိုးခဲ့ၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။ ေရမြန္ကို ခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ သူေတြအားလုံးကေတာ့ ခုခ်ိန္အထိ မမေမ့ႏိုင္ေသးဘဲ လြမ္းဆြတ္ သတိရေနၾကဆဲဆိုတာ အမွန္ပါပဲေနာ္ ။ အခုလည္း ေရမြန္ရွိစဥ္က … Read more
အမေနဲ့အဖေ အသက် ၄၅ ကျော်လာပြီဆိုရင် ဒါတွေဂရုစိုက်ပေးပါ
အမေနဲ့အဖေ အသက် ၄၅ ကျော်လာပြီဆိုရင် ဒါတွေဂရုစိုက်ပေးပါ အသက်၄၅ နဲ့ ၆၀ ကြားဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက သတိပြုရန်အသက်ကြီးလေ ပိုဖြစ်လေမို့ သတိထားပီး ကြိုတင်ကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့ သိထားသင့်ပါတယ်နော် …။ (1) အရိုးတွေချောင်လာတယ်။ ဒူးနာတတ်တယ်။ ချဉ်ဆီခမ်းလို့ ဒူးချောင်တတ်တယ်။ ခါးရိုးဆစ်တွေလည်း နာတတ်တယ်။ ချော်လဲမကျအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ဒူးကို ကွေးလိုက် ဆန့်လိုက် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် တစ်ဖြေးဖြေး နာခြင်း သက်သာလာပါမယ် …။ (2) ကြွက်သားအားမရှိတာ အမျိုးသားက ၃ ပုံပုံံ ၁ပုံ နဲ့ အမျိုးသမီးက တဝက်လောက် အဖြစ်များတယ်။ ကြွက်သားဆိုတာ လက်မောင်းကြွက်သားနဲ့ ခြေသလုံး ကြွက်သား ၂ မျိုးလုံးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းဖြင့် ကြွက်သားအားရှိအောင် လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ် …။ … Read more
အမ်ဳိးသား အလုပ္သြားခ်ိန္ ဇနီးက တျခားလူနဲ႔ ခ်ိန္းေတြ႕ေနတုန္း ၉ႏွစ္အရြယ္သားေလး ဗီ႐ိုထဲဝင္ပုန္းေနေသာအခါ…
ပန်ဒါရေ မင်းအဆင်မှပြေရဲ့လား မုံရွာလူထုနဲ့အတူတစ်သွေးထဲတစ်သားငါတို့ရှိနေပါတယ်…. အမှန်တရားခါးတယ်ညီလေးမိစ္ဆာတွေအတွက်ကျိန်စာတစ်ပုဒ်လို့ ရွတ်ဆိုတိုင်းကြရှုံးနေတဲ့စကစရဲ့အဖြစ်မင်းကိုသိစေမြင်စေချင်ပါဘိ ပန်ဒါရေဖိုင်တင်ကွာ ငါတို့ဒီမိုကရေစီရတဲ့အထိညီလေးမင်းကိုယ်စာအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်ပေးသွားမှာပါ…. ပန်ဒါ ခေါ် ကိုဝေမိုးနိုင်အား အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဆုတောင်းကြပါစို့ 30-6-2021 Sai Khun Naung Zawgyi ပန္ဒါေရ မင္းအဆင္မွေျပရဲ႕လား မုံရြာလူထုနဲ႕အတူတစ္ေသြးထဲတစ္သားငါတို႕ရိွေနပါတယ္…. အမွန္တရားခါးတယ္ညီေလးမိစၦာေတြအတြက္က်ိန္စာတစ္ပုဒ္လို႕ ရြတ္ဆိုတိုင္းျကရံႈးေနတဲ႕စကစရဲ႕အျဖစ္မင္းကိုသိေစျမင္ေစခ်င္ပါဘိ ပန္ဒါေရဖိုင္တင္ကြာ ငါတို႕ဒီမိုကေရစီရတဲ႕အထိညီေလးမင္းကိုယ္စာအဆုံးထိတိုက္ပြဲဝင္ေပးသြားမွာပါ…. ပန္ဒါ ေခၚ ကိုေဝမိုးနိုင္အား အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ဖို႕ဆုေတာင္းျကပါစို႕ 30-6-2021 Sai Khun Naung
“အခကြေးငွေ ပိုမို ပေးဆောင်ရသည့် အဖြစ်အပျက်များကို Wave Money မှ စစ်ဆေး အရေးယူသွားမည်”
“အခကြေးငွေ ပိုမို ပေးဆောင်ရသည့် အဖြစ်အပျက်များကို Wave Money မှ စစ်ဆေး အရေးယူသွားမည်” Wave Money သည် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စ၍ စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရှိနေသည့် အခြေအနေတွင် အခက်အခဲများ ရှိသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်နိုင်ခြင်း မရှိခြင်း၊ အကန့်အသတ်မရှိ မိုဘိုင်းလ်အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အကန့်အသတ်ဖြင့် ရရှိသော အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု မတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှုများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အပေါ်တွင် အဟန့်အတား များစွာရှိခဲ့ပြီး သန်းပေါင်းများစွာသော သုံးစွဲသူများထံသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် အခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့ရလျက် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ အနေဖြင့် Wave Money ငွေလွှဲ၊ ငွေထုတ် … Read more
ပြန်လွတ်မလွတ် မသေချာသေးတဲ့ မောင်ဖြစ်သူကို ရင်တထိတ်ထိတ်စောင့်မျှော်နေတာကြောင့် လွတ်ပြီလို့ အပိုင်ပြောနေသူတွေကို အာမချောင်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မ
ပြန်လွတ်မလွတ် မသေချာသေးတဲ့ မောင်ဖြစ်သူကို ရင်တထိတ်ထိတ်စောင့်မျှော်နေတာကြောင့် လွတ်ပြီလို့ အပိုင်ပြောနေသူတွေကို အာမချောင်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မ ယနေ့ဇွန်လ (၃၀)ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အကျဉ်းထောင်တွေကနေ အကျဉ်းသား (၂၀၀၀)ကျော်ခန့်ကို လွှတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေက ထောင်ပေါက်ဝအရှေ့မှာ မနက်ကတည်းက သွားစောင့်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ မြစ်ကြီးနား၊ထားဝယ်၊လားရှိုးတို့မှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေကနေ ဖမ်းဆီးခံပြည်သူတစ်ချို့ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယနေ့မှာလွတ်မြောက်လာမယ့် ပြည်သူတွေထဲမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အားလုံးက စောင့်စားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေထက်မှာတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်တံခွန် လွတ်မြောက်လာပြီဆိုပြီး သတင်းအမှားတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုင်တံခွန်ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြန်ဖြေရှင်းထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ … Read more
မင္းေသြးနဲ႔ ေရမြန္ကို ရည္စူးၿပီး သကၤန္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ေဖာ္ကာ…..
အဆိုတော်ဖော်ကာကတော့ သီချင်းတွေကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့သီဆိုပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို လက်ခံရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ ရေးစပ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်သီဆိုသူတစ်ယောက်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဖော်ကာတို့မိသားစုက မင်းသွေးနဲ့ ရေမွန်ကို ရည်စူးပြီး သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖော်ကာဟာမင်းသွေးနဲ့လဲ ညီအစ်ကိုလိုချစ်ခင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အခုပရိသတ်တွေနှမျှောတသသဖြစ်နေကြရတဲ့ ရေမွန်နဲ့လဲ SIR အဖြစ်လက်တွဲညီကာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဖော်ကာဟာ ရေမွန် နဲ့ TWO BAND SHOW လေး လုပ်ဖို့ တိုင်ပင်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Zawgyi အဆိုေတာ္ေဖာ္ကာကေတာ့ သီခ်င္းေတြကို ခံစားခ်က္အျပည့္နဲ႔သီဆိုၿပီး ပရိသတ္အားေပးမႈကို လက္ခံရရွိထားသူတစ္ေယာက္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္နဲ႔ ေရးစပ္ထားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ကိုယ္တိုင္သီဆိုသူတစ္ေယာက္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ ေဖာ္ကာတို႔မိသားစုက မင္းေသြးနဲ႔ ေရမြန္ကို ရည္စူးၿပီး သကၤန္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဖာ္ကာဟာမင္းေသြးနဲ႔လဲ ညီအစ္ကိုလိုခ်စ္ခင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အခုပရိသတ္ေတြႏွေမွ်ာတသသျဖစ္ေနၾကရတဲ့ ေရမြန္နဲ႔လဲ … Read more